သစ်သီးတွေမှာ sticker လေးတွေကပ်ထားတာကိုသတိထားမိလား ~ သဘာဝရဲ့အာဟာရ
သစ်သီးတွေမှာ sticker လေးတွေကပ်ထားတာကိုသတိထားမိလား
Tuesday, December 10, 2013 Taunzalat
Market မှာ သစ်သီးတွေဝယ်ဖုးတဲ့ အတွေ့အကြုံတော့ရှိမှာပါ ၊
သစ်သီးတွေမှာ sticker လေးတွေကပ်ထားတာကိုသတိထားမိလား ?
ဘာဖြစ်လို့ ကပ်ထားရတာလဲဆိုတာရော သိကြလား ?
1990 ခုနှစ်မှာ အမေရိကန်လတ်ဆပ်သောထွက်ကုန်အဖွဲ့အစည်း
(The Produce Marketing Association, PMA) ကဦးဆောင်ပြီး
သစ်သီးအမျိုးအစားပေါင်း တစ်ထောင်ကျော်ကိုPLU( Price Look Up ) ဖြင့်ခွဲခြားနိင်ဖို့လုပ်ထားတာပါ။နိင်ငံခြားမှတင်သွင်းလာသောသစ်သီးတိုင်းမှာsticker ကပ်ထားခြင်းက သစ်သီးရဲ့မှတ်ပုံတင် နဲ့တုပါတယ် ။
ကပ်ထားတဲ့ဂဏန်းနံပါတ်မတုသလိုကိုယ်စားပြုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လည်းမတုတော့ပါဘုး။နိင်ငံခြားမှတင်သွင်းလာသောသစ်သီးမှာကပ်ထားတဲ့ စတစ်ကာပေါ်မှာ .....
ဥပမာ ....Zespri (kiwi သီး)
(၂) သစ်သီးထွက်ရာ နိင်ငံ အမည်
ဥပမာ ....New Zealand
(၃) တချို့သစ်သီးများတွင် သစ်သီးအရောင်ခွဲထားခြင်း (သို့)
ဥပမာ(၁) ......Zespri => Gold (or ) Green .
ဥပမာ(၂) ......Sunkist =>Navel ဆောင်းရာသီမှာသီးပြီးအစေ့မရှိတာမို့အခွံခွာပြီးစားရတယ် ။ =>Valencia နွေရာသီမှာသီးပြီး အစေ့ရှိပေမယ့် အရည်ရွှမ်းတာမို့အရည်ညှစ်သောက်ရတယ် ။
(၄) ဂဏန်းနံပါတ် လေးလုံး (သို့) ငါး လုံး ဖြင့် သစ်သီးစိုက်နည်းကို ခွဲခြားထားခြင်း
★ ဥပမာ .....သစ်သီးမှာကပ်ထားတာ9အစ ဆိုရင် (organic ) သဘာဝမြေသြဇာသုံးပြီးစိုက်တဲ့သစ်သီးဖြစ်ပါတယ် ။
ဥပမာ ....organic သစ်သီး မှာ9အစ အနောက်မှာဂဏန်းအားလုံး ငါးလုံးပါ ပါတယ် ။ ( ဥပမာ .. 93036 )
★ ဥပမာ .....သစ်သီးမှာကပ်ထားတာ4(သို့)3အစဆိုရင် ရှေးအစဉ်အလာအတိုင်း(လုလုပ်ထားသောမြေသြဇာနှင့်ဓာတုပိုးသတ်ဆေးဖြန်း )စိုက်တဲ့အသီးဖြစ်ပါတယ် ။ Market တွင်အများဆုံးတွေ့ရတဲ့သစ်သီးအမျိုးအစားပါ ။
ဥပမာ....4(သို့)3အစပါတဲ့သစ်သီးမှာဂဏန်းအားလုံး လေးလုံးသာပါရှိပါတယ် ။ ( ဥပမာ 4014 , 3017 )
*** အဲလိုသစ်သီးစားတဲ့အခါ သစ်သီးကို ရေဖြင့်သေချာဆေးပါ ။ ပိုးသတ်ဆေး ဓာတုဆေးများလွန်းလို့ပါ ။
ဥပမာ .....သစ်သီးမှာကပ်ထားတာ 8 အစ အနောက်မှာဂဏန်း ငါးလုံးပါ ပါတယ် ။ (ဥပမာ 84914 )
***အဲလိုအသီးမျိုးမစားတာအကောင်းဆုံးပါ။လုတီထွင်တာမို့ ရောဂါများရစေလွယ်ပါတယ် ။
ဒီစာလေးကိုသေချာဖတ်စေချင်ပါတယ် ။ပုံနှင့် အတုတစ်ခုချင်းစီ တွဲဖတ်လိုက်ရင်နားလည်လွယ်ပါလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ် ။
သူငယ်ချင်းတို့သစ်သီးဝယ်တဲ့အခါ စကစ်ကာလေးကိုတစ်ချက်လောက် ဂရုစိုက်ကြည့် ကြည့်ပေါ့ ။
note ref: JinLi chao(copy fr minwai)